Ogaden News Agency (ONA) – Magaalada Helsinki caasimada dalka Finland oo lagu daawaday filimkii -Oohinta Qarsoon-
Magaalada Helsinki caasimada dalka Finland oo lagu daawaday filimkii -Oohinta Qarsoon-
Posted by ONA Admin	/ April 29, 2012
Magaalada Helsinki caasimada dalka Finlandoo lagu daawaday filimkii oohinta qarsoon. Midowga dhalinyarda iyo ardayda ogadenina iyo jaaliyadaFinland ayaa si wada jir ah usoo aabaabulay shir lagu daawaday filimka sida aadka ah loo xiiseeyo ee SilentCry.
Filimka ayaa lagu daawada Hall-weyn oo ku yaala baddhtaha magaalada Helsinki halkaasoo ay kasoo qayb galeen dadweyn aad u farabadan oo kamid ah jaaliyada qaybaheeda kala duwan iyo guud ahaan Soomaaliweyn. Waxaa kaloo kasoo qaybgaalay masuulinta ururka OYSU ee qaarada Yurub oo iyaguna shir ku lahaa dalkan Finland.
Intuusan bilaaban daawashada filimka qiirada badani ayaa waxaa madasssha ka hadlay masuulinyiinta jaaliyada iyo qaar kamid ah marti sharaftii shirka kulahaa dalkan sidoo kale xubno ka mid ah ubaxa soo kacaya ee OYSU.
Waxaa hadalka furay gudoomoyaha jaaliyada mudane sheekh Maxamed al azhari oo soo dhaweeyay dadkii ka soo qaybgalay shirka iyo daawashada filimka. Waxaa kaloo madasha ka hadlay oo hadalo gubaabo ah meesha kasoo jeedisay gudoomiha ururka haweenka Ogadenia ee dalkanfinlandmarwo Aamina jwxo. Sidoo kale waxaa qudbado qiiro leh kasoo jeedeeyey ubaxa halganka ee soo baxaya MubashirCaliiyo Majda Cali.
Kadib ayaa laguda galay daawashada filimka oo dadkii meesha isugu yimid kawada oohiyey kuna beeray murogo iyo calool xumo.Waxaad arkeysey qaar ka mid ah dadkii madasha fadhiyay oo ilmada iska tiraya.
Daaawashadii filimka kaddib ayaa waxaa meesha kasoo jeediyey hadal kooban oo mahadnaq ah xoghayaha guud ee ururka OYSU-Yurub mudane Salaad.
Daawashadii filimka ayaa ku soo gaba-gaboobey sidii loogu talogalay, iyadoo maqal iyo muqaal ah qudbadihii madasha ka baxay ayaan dib kasoo gelin doonaa hadii allaha awooda lihi ogolaado.